China High Quality Galvanized Wire Quail Cage စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ | မိုင်းတုံ
ငုံးလှောင်အိမ်များကို ငုံးလှောင်အိမ် ဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပြီး ငုံးလှောင်အိမ်များ၊ ငုံးလှောင်အိမ်များနှင့် သက်ကြီးငုံးလှောင်အိမ်များကို အမျိုးအစားသုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော ငုံးလှောင်အိမ်များသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခိုင်ခံ့သောပစ္စည်းများ၊ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လုပ်အားခြွေတာသောကြောင့် မွေးမြူသူများအား ပြင်းထန်သောလုပ်အားမှ လွတ်မြောက်စေသည်။ ငုံးလှောင်အိမ်သည် အေးသောသွပ်ရည်စိမ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် လေ၀င်လေထွက်ကောင်းသည့်အခြေအနေအောက်တွင် 15 နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပူပြင်းသောအ၀တ်စဖြင့် သွပ်ရည်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အနှစ် 20 ကျော်အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ငုံးလှောင်အိမ်များကို ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီး စတိုင်လ်နှင့် ပစ္စည်းကို သင့်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းအပြင် ငုံးလှောင်အိမ်များသည် ခိုင်မာမှုနှင့် လေဝင်လေထွက်ကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းသည် လှောင်အိမ်အတွင်းရှိ ငုံးများ အလွယ်တကူ ထွက်မလာစေရန်နှင့် တင်းကျပ်မှု ကောင်းမွန်သင့်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အမှုထမ်းများအပြင်၊ အချို့သောကြောင်များနှင့်ခွေးများနှင့်ငုံး၏သဘာဝရန်သူများမှမပျက်စီးစေရန်လှောင်အိမ်၏ဒီဇိုင်းသည်သေချာစေရန်နှင့်ငုံးများအတွက်လုံခြုံသော "အိမ်" ကိုပေးရမည်။ ထို့အပြင် မွေးမြူရေးခြံရှိ လှောင်အိမ်၏ အနေအထားမှာလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ငုံးလှောင်အိမ်၏ အနေအထားသည် အလွန်မှောင်မိုက် သို့မဟုတ် တောက်ပလွန်းအောင် မလုပ်သင့်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းကို ပြတင်းပေါက် ငုံးလှောင်အိမ်တွင် ထည့်ထားလျှင် မိုးရွာသော သို့မဟုတ် လေထန်သော ရာသီဥတုတွင် လှောင်အိမ်အတွင်းရှိ ငုံးများကို မထိခိုက်ကြောင်း သေချာပါစေ။
ငုံးမွေးမြူခြင်းနည်းပညာ၏ အခြေခံအချက်များ ငုံးမွေးမြူခြင်း၏ အဓိကအချက်များ [ငုံးမွေးမြူခြင်း] ငုံးတင်ရန်အတွက် အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များ
1. ငုံးက နွေးပြီး အအေးကိုကြောက်တယ်။ အိမ်တွင် သင့်လျော်သော အပူချိန်မှာ 20 ℃ ~ 22 ℃ ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လှောင်အိမ်၏ အောက်အလွှာ၏ အပူချိန်သည် အပေါ်အလွှာထက်5ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့် နိမ့်နေသောကြောင့် အောက်အလွှာ၏ သိပ်သည်းဆကို တိုးလာခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ရေတိုမြင့်မားသောအပူချိန် (35 ℃ ~ 36 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) သည် ငုံးဥထုတ်လုပ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း ကြာချိန်ကြာပါက မျိုးဥထွက်နှုန်းလည်း သိသိသာသာလျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နွေရာသီတွင် အအေးခံရန် အထူးဂရုပြုသင့်ပြီး အခြေအနေခွင့်ပြုပါက အိမ်တွင်း၌ အိတ်ဇောပန်ကာများ တပ်ဆင်နိုင်သည်။
2. စိုထိုင်းဆ အခန်းအတွင်းရှိ နှိုင်းရစိုထိုင်းဆသည် 50% ~ 55% ပိုကောင်းသည်။ စိုထိုင်းဆများလွန်းပါက လေဝင်လေထွက်အတုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စိုထိုင်းဆနည်းလွန်းပါက မြေပြင်ပေါ်တွင် ရေအနည်းငယ်ဖြန်းပါ။ ဆောင်းရာသီတွင် မြောက်ဘက်ရှိ ရာသီဥတုသည် ခြောက်သွေ့သောကြောင့် အိမ်တွင်းအပူပေးမှုကို ကျောက်မီးသွေးမီးဖိုဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး စိုစွတ်စေရန် ကျောက်မီးသွေးမီးဖိုပေါ်တွင် ရေနွေးအိုးထားရှိနိုင်သည်။
ဥဥသည့် ငုံးများ၏ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုသည် သန်စွမ်းပြီး ပြင်းထန်သော လှောင်အိမ်ပေါင်းများစွာ မွေးမြူခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းသည် အမိုးနီးယား၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိဒ်ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတ်ငွေ့များစွာကို ထုတ်လုပ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လေဝင်လေထွက်နှင့် အိတ်ဇောပေါက်များကို အခန်းအောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသင့်သည်။ နွေရာသီတွင် လေဝင်လေထွက်နှုန်းသည် တစ်နာရီလျှင် ၃ ကုဗမီတာမှ ၄ ကုဗမီတာနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် တစ်နာရီလျှင် ၁ ကုဗမီတာ ရှိသင့်သည်။ တွဲထားသော လှောင်အိမ်များသည် ဆင့်ထားသော လှောင်အိမ်များထက် လေဝင်လေထွက် ပိုရှိသင့်သည်။ နောက်ထပ်
ယခင်- အလိုအလျောက် H အမျိုးအစား ကလေးကြက်လှောင်အိမ်
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံမှစျေးနှုန်းချိုသာသော လေဝင်လေထွက်ထုတ်ယူသည့် ပန်ကာ- လေဝင်လေထွက်အအေးခံကိရိယာများအသုံးပြုထားသော ကြက်ခြံ- Motong